अविश्वास प्रस्ताव र एमाले सांसदको राजीनामा सँगसँगै ! Nepalpatra अविश्वास प्रस्ताव र एमाले सांसदको राजीनामा सँगसँगै !
काठमाडौं बैशाख २३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको गठबन्धनले एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहका सांसदको राजीनामा र अविश्वास प्रस्ताव सँगसँगै हुने गरी छलफल अघि बढाएको छ ।
यसअघि कांग्रेस सभापति देउवाको जोड चुनावमै जानुपर्छ भन्ने भए पनि लुम्बिनी प्रदेशको प्रकरणपछि उनी हच्किएको र कम्तीमा ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जानु हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको प्रकरणपछि देउवा सार्वजनिक रूपमा पनि ओलीप्रति अलि धेरै आक्रोशित देखिन्छन् ।
बुधबारमात्रै ओलीले गरेको सत्ता सहकार्य र चुनावी गठबन्धनको प्रस्तावलाई देउवाले अस्वीकार गरेका छन् । बरु राष्ट्रिय सभाको वाग्मती प्रदेशको उम्मेदवारमा एमालेको नेपाल समूहले अघि सारेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटालाई सहयोग गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । ‘यही सहमतिलाई सत्ता सहकार्यसम्म लैजाने गरी सहमति जुटाएर फाइनल कुरा शुक्रबारसम्म टुंगो लाग्छ, स्रोतले भन्यो।’ यो कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
थपिँदै कोरोनाका भेरियन्ट, कुन-कुन भेरियन्ट पहिचान भए ?
सक्रिय मनसुनले भारी वर्षाको सम्भावना कायमै, सतर्क रहन आग्रह